Yini abantu abangayenza ukuvimbela ukuncintisana okwedlulele ngaphakathi kwemisebe? - Mytika Speak
Ikhaya / Ama-Rays / Yini abantu abangayenza ukuvimbela ukuncintisana okwedlulele ngaphakathi kwemisebe?
Ngozwela, abantu bangafunda ukwamukela injabulo yabanye ngaphandle kokuzwa isidingo sokuyekethisa okwabo.
Ngokwamukela injabulo yomunye nomunye, i imisebe hlanganani.
Lapho uzwelana nabantu abaningi, usondelene kakhulu noMthombo.
Umbono wami ucacile
Isinyathelo esilandelayo engisitholayo
Inhliziyo yami ihlala inomusa
Njengoba ngisula izinyembezi
Amathegiukuncintisana ukuqonda Ugqozi izinkondlo imisebe ingokomoya Hlanganisa